Print Page - Rajesh Hamal - Photos and Profile
xNepali Forum => Celebrity profile => Topic started by: kurakani on August 08, 2009, 08:27:33 AM
Title: Rajesh Hamal - Photos and Profile
Post by: kurakani on August 08, 2009, 08:27:33 AM
This topic has moved to main site (http://xnepali.com/movies/rajesh-hamal-profile-and-interviews/)
Post by: tundikhel on August 08, 2009, 09:32:56 AM
Post by: tundikhel on August 08, 2009, 10:49:20 PM
Yesto pani geet :)
Post by: tundikhel on August 14, 2009, 10:00:47 PM
Post by: tundikhel on August 23, 2009, 10:35:15 PM
Post by: tundikhel on August 26, 2009, 10:33:58 PM
Post by: kurakani on September 02, 2009, 06:53:25 AM
Post by: tundikhel on September 03, 2009, 09:39:36 AM
Post by: tundikhel on October 17, 2009, 04:30:18 AM
Post by: tundikhel on October 17, 2009, 04:31:14 AM
Title: Re: Rajesh Hamal - Photos and Profile
Post by: tundikhel on November 05, 2009, 07:14:47 AM
Post by: tundikhel on November 27, 2009, 12:50:21 AM
Post by: tundikhel on November 27, 2009, 04:36:18 AM
Post by: tundikhel on November 29, 2009, 02:16:24 AM
Post by: tundikhel on December 14, 2009, 03:11:49 AM
Post by: tundikhel on December 17, 2009, 03:01:56 AM
Post by: tundikhel on December 17, 2009, 02:03:56 PM
Post by: tundikhel on January 26, 2010, 12:39:25 AM
Post by: kurakani on February 03, 2010, 11:54:40 AM
Post by: tundikhel on February 23, 2010, 11:34:12 PM
Post by: tundikhel on February 26, 2010, 10:33:11 PM
Post by: tundikhel on March 01, 2010, 07:26:06 AM
Post by: tundikhel on March 19, 2010, 01:25:06 PM
Title: Re: Rajesh Hamal - अन्तरबार्ता
Post by: tundikhel on June 03, 2012, 05:27:04 AM
Post by: tundikhel on June 05, 2012, 11:59:19 AM
Post by: tundikhel on September 08, 2012, 02:34:11 AM
Post by: anand on March 12, 2015, 04:19:47 AM
Post by: xsajha on March 13, 2015, 01:11:31 AM
Post by: anand on March 17, 2015, 01:16:53 AM
Post by: anand on March 17, 2015, 11:49:49 PM
Post by: tundikhel on March 22, 2015, 10:12:28 AM
Rajesh Hamal in NY, USA
Post by: anand on March 30, 2015, 12:53:14 PM
For the first time Rajesh and Madhu have given interview together in TV
Watch the video and read about his USA tour
Post by: kurakani on March 30, 2015, 09:29:58 PM
Quote from: anand on March 30, 2015, 12:53:14 PM
Post by: tundikhel on June 13, 2015, 01:16:11 AM
Post by: anand on June 19, 2015, 12:51:34 PM
मेरो हनिमुन, मधुलाई रहर पुग्यो होला : महानायक हमाल
शुक्रबार, जेठ २९, २०७२ १०:४५:०६
विवाह भएकै दिन हामी हनिमुनका लागि धुलिखेल रिसोर्ट गयौं । मेरो विवाहका लागि नेपाल आउनुभएका दिदीभिनाजुले हाम्रो लागि विवाहको उपहारस्वरूप रिसोर्टमा रुम बुक गरिदिनुभएको रहेछ ।
एक रातकै लगभग ४० हजार रुपैयाँ पर्छ क्यार । नेपाली शैलीमा बनेको सो रिसोर्ट निकै आकर्षक छ । रिसोर्टले हाम्रो लागि असाध्यै राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको थियो । बेड रुमको सजावटले नै हामीलाई आकर्षित गरिहाल्यो । फूलगुच्छाले झकिझकाउ ।
त्यस्तो सजावटले पार्टनरलाई पनि खुसी बनाउँदो रहेछ । सुरुमा हामी रुममा जाँदा एक प्रकारको सजावट थियो । डिनर गरेर सुत्न जाँदा नाइटका लागि अनुकूल हुने अर्कै सजावट थियो । हनिमुनको समय, हामी यसै पनि उत्साहित थियौं । त्यसमा पनि रुम र बेडरुमको सजावट एवं वातावरणले झनै रोमाञ्चित बनाइदियो ।
मधु (भट्टराई) ले जीवनमा पहिलो पटक आफ्नो नाम पछाडि हमाल लेखेको देखेको त्यही हो । हाम्रो बेड रुममा ‘वेलकम मिस्टर एन्ड मिसेस हमाल’ लेखेको थियो । त्यसअघि मधुलाई मिसेज हमाल कसैले भनेको थिएन ।
हामीले त्यहाँ केवल एक रात बितायौं । पहिलो हनिमुन त्यही भयो । विवाह सकिए पनि रिसेप्सन पार्टीको तयारीमा जुट्नु थियो । रिसेप्सनपछि हनिमुन जाने सोच थियो । तर, रिसेप्सनकै पर्सिपल्ट कार्यक्रमका लागि म अस्ट्रेलिया जानुपर्ने भएकाले समय मिलेन । हनिमुनले जीवनमा विशेष अर्थ राख्छ । कालान्तरसम्म सुमधुर सम्झना रहन्छ । विवाहपछि यसरी घुमेका थियौं, यस्तो ठाउँमा पुगेका थियौं, रमाइलो गरेका थियौं भन्ने रहिरहन्छ । तर, हनिमुन मनाउन कतै जानसाथ नाता प्रगाढ हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।
रिसेप्सनलगत्तै एक महिनाका लागि अस्ट्रेलिया जानुपर्ने भएकाले हनिमुन मनाउन पुगेकै छैन भन्ने लागि रहेको थियो । मेरो नातेदार भाइबहिनीले पोखराको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टमा हनिमुनका लागि तीन दिन रुम बुक गरिदिएको रहेछ ।
अस्ट्रेलियाबाट फर्कनासाथ दोस्रो पटक हनिमुन मनाउन त्यता गयौं । त्यहाँ पनि मेरो हनिमुन भनेपछि रुम, बेड रुम विशेष तरिकाले सजाइदिएको रहेछ । तीन दिनको बसाइ ज्यादै रमाइलो भयो ।
मलाई विवाह हुँदासम्म पनि कताकता चलचित्रको छायांकन पो हो कि जस्तो लागिरहेको थियो । चलचित्रमा दर्जनौं पटक विवाहको दृश्य गरियो । उही मण्डप, उस्तै तरिका । आफू दुलहाको भेषमा अनि छेउमा दुलही । त्यसैले आफ्नो विवाहमा पण्डितजीलाई ‘जति सक्दो छोटो विधि गर्नू’ भनेको थिएँ ।
हनिमुन मनाउन निस्केपछि चाहिँ साँच्चिकै विवाह गरेको अनुभूति भयो । हनिमुन मान्छेको निजी जीवनको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो, जुन दुईजना बीचमा मात्रै सीमित हुन्छ । विवाहलगायत अन्य उत्सव एवं संस्कार त अरूसँंग पनि बाँडेर मनाइन्छ । संयोग नै भनौं हामीले पटकपटक हनिमुन मनाउन जाने अवसर पायौं ।
हनिमुनका बेला यसै पनि बढी सामीप्य, आत्मीयता र खुसीयाली हुन्छ । मान्छेमा जीवनको अर्को कालखण्डमा उही रोमान्टिक भावना नहुन सक्छ । त्यसैले जीवनमा हनिमुनको विशेष अर्थ रहन्छ ।
संयोग नै भनौं यस्तो उत्सव हामीले पटकपटक मनाउने अवसर पायौं । पोखराबाट फर्केलगत्तै मधुको बहिनी (काकाको छोरी) ले गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्टमा दुई रातका लागि रुम बुक गरिदिएको रहेछ । त्यहाँ पनि गयौं ।
हनिमुनका लागि हामी गएका तिनै ठाउँ विशेष थियो । हरेक रिसोर्टबाट विशेष केयर पायौं । आफ्नो तर्फबाट केक बनाइदिने, साजसजावटमा ध्यान दिने, राम्रो हेरचार गर्नेलगायतका विभिन्न कारणले हामीलाई पनि विशेष अनुभूति भयो ।
हनिमुनका लागि गएका तीनैवटा ठाउँ हामीले उपहारमा पाएका थियौं । सायद त्यही भएर होला मधुले ‘ती सबै उपहारमा पाएको, हाम्रो आफ्नै तर्फबाट चाहिँ खोइ त हनिमुन ?’ भनेर फेरि हनिमुनका लागि बाहिर जाने इच्छा जाहेर गरिन् ।
नेपालमा त भयो, अब कतै विदेश गएर हनिमुन मनाउने चाहना रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । तर कामको सिलसिलाले समय मिलेको थिएन । गत फेब्रुअरीमा अमेरिका गयौं । हामीले एकसाथ विदेश भ्रमण गरेको त्यो पहिलो अवसर पनि हो । कार्यक्रम पनि भएकाले सबै चाँचोपाँजो मिलाएको थियो । सात समुद्रपारि एकसाथ समय बिताउन पाउँदाको रमाइलो कति हुन्छ भन्नै परेन । त्यो हाम्रो लागि चौथो हनिमुन यात्रा भयो । मलाई आशा छ अब चाहिँ मधुलाई हनिमुन मनाउन जाने रहर पुग्यो होला ।
Post by: anand on July 02, 2015, 11:41:56 AM
राजेश हमाल पुनर्निमाण सद्भावना दूत
फिल्मीखबर, काठमाडौं, २०७२ आषाढ १६, बुधवार
अभिनेता राजेश हमाल ‘बिल्डिङ ब्याक राइट’ नामक पुनर्निर्माण अभियानका सद्भावना दूत घोषित भएका छन् । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा हमाललाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै सद्भावना दूत भएको घोषणा गरेका हुन् । सद्भावना दूत हमालले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न स्वयंसेवकहरुलाई अभिप्रेरित गर्नेछन् ।
कार्यक्रममा हमालले अबका संरचनाहरु प्राविधिक र वातावरणीय सन्तुलनलाई ख्याल गरेर निर्माण हुनु पर्ने जिकिर गरे । दूत घोषणापछि हमालले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको हुनसक्छ त्यसैले कस्तो खाले श्रम प्रयोग भइरहेको छ र अधिकार तथा न्याय पक्षलाई ख्याल गरिएको छ कि छैन, त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’
‘बिल्डिङ ब्याक राइट’ स्वयंसेवीहरुले चलाएको एउटा अभियान हो, जसले जनता, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र नेपाल सरकारलाई सांस्कृतिक सम्पदा, आचारसंहिता र पर्यावरण पक्षमा समेत ध्यान दिँदै सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्थासहित पुनर्निर्माण कार्य चलाउन उत्प्रेरित गर्नेछ । ’ कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, एकीकृत माओवादीका नेता राम कार्की, अभिनेत्री सुष्मा कार्की, राजेन्द्र खनाल, किशोरकुमार झालगायत पनि उपस्थित थिए ।
Post by: tundikhel on April 17, 2016, 05:11:20 AM
ओरालो लागेका राजेश हमालः दिन सकिएकै हुन् ?
समय बलबान छ । यही समयसँगै फेरिन्छ समाज, फेरिन्छ रुची र फेरिन्छन् पात्रहरु ।
कुनै समय नेपाली चलचित्रमा राजेश हमालको एकछत्र थियो । ‘कुनै समय’ भन्दा उनीमाथि अन्याय हुन सक्छ, किनकी झण्डै दुई दशक नेपाली चलचित्रमा उनको राज चल्यो । झण्डै दुइ दशकसम्म उनका प्रतिस्पर्धि नै कोही भएनन् । तर, समयसँगै राजेश हमाल ओझेल पर्ने दिन पनि आयो ।
हामी कुरा गरिरहेका छौं, मैझारो हुने क्रममा रहेको वर्ष २०७२ को ।
एकै वर्षभित्र राजेश हमालका एक दर्जन फिल्म प्रदर्शन हुने समय पनि थिए । त्यो अतित बनिसकेको छ । यस वर्ष हमालको जम्माजम्मी एउटा फिल्म दर्शकमाझ आयो, बाग्मती । त्यही फिल्मको हालत पनि यति दयनीय रह्यो कि समिक्षकहरुले समिक्षा लेख्न नभ्याउँदै फिल्म हलबाट उत्रिसकेको थियो । तर, दुख यसमा छैन, कि फिल्म फ्लप भयो । दुख छ हाम्रा महानायकले सो चलचित्रमा निभाएको भूमिकामा । भोजपुरी फिल्मका स्टार फिल्मभरी छाउँदा हमाल सहनायक जस्ता मात्रै देखिए ।
त्यसो त, फिल्म निर्माण पक्षले राजेश हमाललाई अत्यधिक हाइलाइट गरेर नै प्रचारप्रसार गरेको थियो । तर, त्यसले दर्शकलाई पटक्कै आकषिर्त गरेन । चलचित्रको पहिलो शो हेर्नै दर्शक आएनन् । यसबाट नेपालमा राजेश हमालको स्टारडम सकिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । निकट भविष्यमा पनि कुनै आशालाग्दो चलचित्र उनीसँग छैन ।
संख्यात्मकरुपमा राजेश हमालले कति फिल्म खेले भन्ने उनैलाई हेक्का छैन होला । तर, सम्झनलायक फिल्मको कुरा गर्दा देउता र बसन्तीपछि तेस्रो फिल्मको नाम लिन मुस्किल पर्छ । चलचित्रको कथा र आफ्नो भूमिकाको कुनै हेक्का नराखी भटाभट फिल्म साइन गर्दै गए । संख्याकै आधारमा उनी नम्बर वानका रुपमा स्थापित पनि भए । तर, नेपाली फिल्मले गुणात्मक फड्को मारेको समयमा भने उनी ओझेल परेका छन् । यसबाट उनले समय अनुसार आफूलाई बदल्न सकेनन् भन्ने देखिन्छ ।
यद्यपि पछिल्लो असफलताबाट राजेश हमालले नेपाली फिल्ममा बनाएको इतिहास भने मेटिदैन । नेपाली फिल्ममा उनको समय सकियो भन्ने पनि होइन । तर, उनले अब पहिलेकै जस्तो चरित्रमा निरन्तरता भने दिन सक्दैनन् । उनले आफूलाई हिरोबाट अभिनेतामा बदल्ने बेला आइसकेको छ । त्यसरी बदल्न चाहे भने अझै पनि नेपाली फिल्ममा उनका लागि स्थान हुन सक्छ । बलिउडमा ७० काटेका अमिताभ बच्चन अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । तर, उनी हिरोबाट अभिनेतामा रुपान्तरण भएको धेरै भइसकेको छ ।
Post by: tundikhel on June 14, 2016, 12:42:40 PM
भारतबाट मोडलिङ सुरु ,सडकको क्रममा घाईते – राजेश हमालबारे ६ प्रसंग
महानायक राजेश हमालले जेठ २७ गते ५२ औँ जन्मदिन मनाए । यसपालीको जन्मदिन उनले चितवनको चितवन मानव सेवा आश्रममा चार दर्जन बृद्धबृद्धाहरुसँग मनाएका हुन् । राजेश हमाल एक प्रतिष्ठीत सेलिब्रेटी भईकन पनि जन्मदिन भने सामान्य तरिकाले मनाउने गर्छन् ।
पाल्पाको तानसेनमा जन्मेका राजेश नेपाली सिने उद्योगका महानायक हुन् । उनले हासील गरेको महानाकको उपाधी हालसम्म कसैले पनि हासील गर्न सकेका छैनन् । पाल्पाको तानसेनमा जन्मेका राजेशले बाल्यकाल तानसेनमा नै बिताएका थिए । कक्षा ८ सम्म तानसेनमा पढेका उनी त्यसपछिको शिक्षाका लागि पितासँग रसिया पुगेका थिए । त्यसबखत उनका पिता रुसको लागि नेपाली राजदुत थिए । नेपाली सेलिब्रेटीमध्ये राजेश सबैभन्दा धेरै पढ्ने सेलिब्रेटीको रुपमा पनि गनिन्छन् । उनले अंग्रेजी बिषयमा डिग्री हासील गरेका छन् । उनले भारतको चन्डीगडबाट एम ए गरेका हुन् ।
भारतबाट मोडलिङ सुरु
राजेश हमालले कलेजको समयमा मोडलिङ सुरु गरेका थिए । सन् १९८५ मा उनले ईँडीयन म्यागजीनको लागि मोडल रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि उनले काठमाण्डौ र दिल्लीमा पनि र्याम्प वाक गरे । उनको फिल्मी करियर भने नेपाली फिल्म युग देखी युगसम्म बाट सुरु भएको थियो । पहिलो फिल्मले नै राजेश हमाललाई सुपरस्टार बनाईदिएको थियो । सन् १९८९ मा युगदेखी युगबाट उनले सर्बोत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड पनि हात पारेका थिए । त्यसपछि पनि उनले लगातार सफलता पाए । युग देखी युगसम्म पछि फिल्म देउता , चट्याङ , अपराधमा राजेश लिड रोलमा देखीए । उनलाई यी फिल्महरुमा पनि दर्शकले रुचाए । उनले यी फिल्महरुबट पनि बेस्ट अभिनेताको अवार्ड हात पारेका थिए । राजेशले अहिलेसम्म दुई सय भन्दा धेरै फिल्ममा काम गरेका छन् । जसमध्ये युगदेखी युग सम्म, साथी, शंकर, माटो बोल्छ , बसन्ती लगायत दर्जनौँ फिल्महरु चर्चीत छन् ।
सडकको सुटिङमा घाईते बनेका राजेश
२०५१ सालमा फिल्म सडकको सुटिङका क्रममा राजेश घाईते बनेका थिए । फिल्मको एक सिनमा आफ्नो परिवारलाई दुश्मनहरुबाट बचाउनको लागि उनलाई लड्नु पर्ने थियो । यहि सिन सुटिङका क्रममा उनीमाथि ईटा खसेर उनी घाईते भएका थिए । राजेश घाईते भएपछि फिल्म निर्माण समूहले सुटिङ रोकेर उनलाई अस्पताल पुर्याएको थियो । त्यसबखत उनका धेरै फ्यानहरु उनलाई भेट्न अस्पतालमा पुगेका थिए । सुटिङमा घाईते भएका उनले पाँच महिना आराम गरेपछि मात्र फिल्ममा काम गरेका थिए ।
बिज्ञापनमा पनि अघि छन् राजेश
राजेश हमाल नेपाली फिल्म उद्योगका महानायक त हुन् नै यसका साथै उनी बिज्ञापनहरुमा पनि अरु सेलिब्रेटीहरु भन्दा अघि नै छन् । उनले हिमाल सिमेन्ट, रियल जुस , जगदम्बा स्टील , नेपाटप – सब ठिकठाक लगायतका बिज्ञापनमा काम गरेका छन् । सन् २०६९ मा उनी मेरी बास्सैमा क्यामीयो रोलमा पनि देखा परेका थिए । राजेश हमाललले कान्तीपूर टेलिभिजनको कार्यक्रम वाई वाई क्वीजको प्रस्तोता भएर पनि काम गरेका छन् ।
सुन्दर पुरुषमा पनि परे राजेश
उनलाई २०४८ र २०५४ मा केहि म्यागजीनहरुले नेपालकै सुन्दर ब्यक्तिको सुचिमा राखेका थिए । त्यस्तै उनलाई २०५४ मा कान्तीपूरले पनि सबैभन्दा सेक्सी पुरुषको सुचीमा स्थान दिएको थियो । यति मात्रै नभयर २०६३ मा राजेश हमाललाई अस्ट्रेलियाको पिपुल्स म्यागजीनले नेपालका शक्तिशाली सेलिब्रेटीको सुचीमा राखेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्चित राजेश
राजेश हमालको एक डाईलग निकै चर्चित छ साथीको लागि यो हात सलाम हो दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो । यो डाईलग फिल्म पृथ्वीको हो । त्यस्तै राजेश हमाल धेरै ट्रोल हुने सेलिब्रेटीमा पनि पर्छीन् । उनका नाममा धेरै जोक्सहरु बनेका छन् । फेसबुकमा उनको राजेश दाईको जोक्स नामले केहि अकाउण्टहरु पनि खोलीएका छन् ।
पाँच दशक काटेपछि विवाह
करियरमा सफल भएका राजेश पाँच दशक काटेपछि विवाह बन्धनमा बाँधीएका हुन् । २०७१ जेठ १० गते उनले मोडल मधु भट्टराईसँग लगन गाँठो कसेका थिए । मधु उनीभन्दा २० बर्ष कान्छी छन् । राजेश र मधुको प्रेम विवाह भएको थियो ।
Post by: tundikhel on December 28, 2016, 03:14:18 PM
राजेश हमाल नभएको भए…
Posted by: nayapatrika August 11, 2015
नेपाली चलचित्र उद्योगमा राजेश हमालको परिचय ‘महानायक’को छ । उनी भएर उद्योगले के पायो ? र, उनी नभएको भए के गुमाउँथ्यो ? निर्देशक र फिल्म विशेषज्ञसमेत रहेका प्रकाश सायमीको विश्लेषण :
एक–डेढ दशकपछि राजेश हमालका बारेमा कुनै दिन हम जाएगा टाइपका चुट्किलासंग्रह निस्केला । त्यतिवेला ती चुट्किलामा भएका हास्यास्पद पक्ष र भावगाम्भीर्यमाथि चर्चा आजजस्तो नभए पनि आजको रूपमा नहोला । तर, नचिन्नेका लागि राजेश हमाल नेपाली फिल्म अभिनयका डाइनोसरजस्ता पनि लाग्नेछैनन्, किनकि उनको अभिनयको क्लाउस्ट्रोफोबिक पक्ष त्यतिवेला पनि यथावत् नै कायम राख्नेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
हमाल नेपाली रजतपटमा आउँदा लामो कपाल, उचाइ र आँखाका कारण लोकप्रिय थिए । त्यतिवेला उनलाई टार्जन हिरो पनि भनियो । हलिउड र बलिउडबाट टार्जन हिरो जाँदै थिए त्यो वेला ।
पहिलो फिल्म उनका निम्ति हाडेओखरजस्तै सावित भयो । दीपक रायमाझी निर्देशित युगदेखि युगसम्म धेरै हदसम्म राजेशकै निम्ति पनि परीक्षणमुखी थियो । सिनेमा चल्यो र यसले राजेश हमाललाई टिकाउ अभिनेताका रूपमा एउटा दर्जा दियो ।
प्रदर्शनका हिसाबले यो राजेश हमालको पहिलो फिल्म थियो, तर अभिनय वा अनुबन्धका हिसाबले होइन, उनको पहिलो फिल्म भाग्य रेखा थियो ।
भाग्यरेखाका निम्ति पनि उनले धेरै दु:ख–दर्द भोग्नुपर्‍यो । यस फिल्मको मुहूर्तमा नायिकाका रूपमा करिश्मा केसी अनुबन्धित भएकी थिइन्, करिश्माले त्यो वेला नयाँ नायकसित हो भने १० हजार बढी चाहिन्छ भनेर त्यो फिल्म रिजेक्ट गरेकी थिइन् ।
फिल्मको मुहूर्तमा त्यतिवेला प्रमुख अतिथिका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय तोकिएको समयभन्दा आधा घन्टाअगाडि होटल ब्लुस्टारको दैलोमा आइपुगेका थिए, तर नयाँ नायक एक घन्टा ढिलो आएकाले मुहूर्त पनि ढिलै सुरु भएको थियो । राजेशका निम्ति यो ढिलो सुरु भएको मुहूर्त अफाप भयो, यस फिल्मबाट पहिली नायिका करिश्मा निस्किइन्, त्यसपछि अर्की नायिका कृष्टि केसी त्यसपछि नायक राजेश हमाल ।
भाग्य रेखा सबैका निम्ति अफापसिद्ध भयो, तर राजेशका निम्ति यो पनि फलिफाप नै भयो, उनी सदैव यसैकारण पनि चर्चामा नै रहे ।
कुनै फिल्मबाट यसरी नायक निकालिँदा स्कुप मारेको यो पहिलो घटना थियो । राजेश यसर्थमा नेपाली सिने बजारका निम्ति पहिलो स्कुप भए ।
राजेश हमालले युगदेखि युगसम्मको सफलतापछि प्रकाश थापाको अधिकारमा अभिनय गरे, जसमा उनको निर्देशकसितको अनवनका कारण धेरै विवाद र मतभेद कायमै रह्यो । अधिकार न प्रकाश थापाको शैलीको फिल्म भयो, न राजेश हमाल शैलीको ।
अधिकारपछि देवता, पृथ्वी, कसम, भीष्म प्रतिज्ञामा अभिनय गरेपछि राजेश हमालको अभिनयको शैली, संवादको शैली अनि गेटअपमा एक किसिमको आलोचना अनि चर्चा हुन थाल्यो ।
पृथ्वी सिनेमाको साथीका लागि यो हात सलाम हो, दुस्मनका लागि यो हात फलाम हो । संवाद राजेशको फिल्मी क्यारिअरग्राफमा सर्वाधिक लोकप्रिय संवाद भयो, आफ्नो पच्चीस वर्षे फिल्मी क्यारिअरमा उनले यो संवाद सबभन्दा धेरै बोल्ने फिल्मबाहिर र भित्र पनि ।
राजेश हमालको सिनेमामा केही आफ्ना पक्ष छन्, एंग्री योंगम्यानको इमेज जुन सत्तरीको दशकमा बलिउडमा सलिम जावेदले स्थापित गरेका थिए भने यहाँ यसको श्रेय राजेशलाई जान्छ ।
राजेश हमाल आउनुभन्दा पहिले नेपाली सिनेमामा पोस्टर भ्यालु थिएन, उनका केही फिल्म सफल भएपछि उनको टाउको मात्र टाँस्दा पनि फिल्म चल्ने हल्लाले अखबारी खेती गर्‍यो ।
राजेश हमाल आफ्ना लागि भन्दा नयाँ नायिका र नयाँ निर्देशकका लागि लक्की सावित गरे, उनले साइन गर्‍यो भनेपछि फिल्मलाई वितरकले विनामोलतोल किनिहाल्थे, यो टेरोरिटी उनले नै बनाएका हुन् ।
राजेश हमाल इन्डस्ट्रीमा आउँदा तीनजना हिरोको जाज्वल्यमान युग थियो, शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी र अर्जुनजंग शाहीको । पछि यी तीनैको सामूहिकताको साम्यपन राजेशमा देखियो । बाँकी तीनजना अतिरिक्तजस्ता हुँदै गए ।
अनुशासनको धेरै कमी भएको नेपाली फिल्म उद्योगमा राजेशले समय र पंक्चुयालिटीको नयाँ नमुना बनाए, समयमा सिनेमा बन्ने र प्रदर्शन हुने । फिल्म उद्योगमा राजेशलाई हेरेर सिनेमा लेखिने र बनाउने परम्परा सुरु भयो । उनलाई हेरेर आउने नयाँ शैलीका नायक पनि आउन थाले ।
नृत्यमा कमजोर मानिने राजेशका निम्ति नृत्य निर्देशकले आफ्नो स्टेप नै बदल्न थाले । राजेशको आँखामा खराबी छ भन्ने क्यामेराम्यानको लेन्स नै बिस्तारै बन्द हुँदै गयो ।
राजेश हमाल नायकका रूपमा सफल भएको समयमा सबभन्दा धेरै फिल्म पत्रकार र सबैभन्दा धेरै फिल्मी पत्रिका बजारमा देखिए ।
यो एउटा सुखद कुरा हो, राजेश हमालको विवादको कुरा पनि हटकेकका रूपमा बिक्ने नेपाली फिल्म उद्योगमा पूर्ववर्ती नायक भुवन र अर्जुन बिस्तारै सेलाउँदै गए भने अर्जुनका चलचित्र ४६ सालपछि प्रतिबन्धितजस्तो भएपछि राजेशका निम्ति नयाँ बाटो बन्यो ।
अरूले बनाएको बाटोमा राजेश हमालले आफ्नो बाटोलाई मूल बाटो बनाएर अघिल्लो बाटोलाई फुटपाथ बनाइदिए ।
समयको शक्ति र त्यसको स्वाद फरक–फरक हुँदो रहेछ, अर्जुन एउटा विवादपछि रजतपटबाट बिलाए भने यस्तै विवादमा राजेश चर्चामा आए, नग्न फोटो प्रकरण । राजेशको नग्न फोटो सिने पत्रिकामा छापिएपछि उनलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने चलचित्र कलाकार संघ र सिने समाज एकातिर थिए भने उनको सिनेमा पर्खेर बस्ने दर्शक झन् भारी थिए । बहिष्कारको त्यो प्रसंगमा राजेशको एउटा मात्र सिनेमा प्रदर्शन भयो, सिनेमा ।
सिमानाको प्रदर्शनपछि राजेशको नांगो फोटो छाप्ने पत्रिकाले उनीसित सम्झौता गरेर नयाँ अंक तयार पारे भने यसको लगत्तै उनी ०५३ को वैशाखदेखि एक लाखका नायक भए, यसअघि कुनै नायक वा नायिकाले यति रकम माग्ने हिम्मत गरेका थिएनन् ।
राजेश हमालले अवतारमा एक लाख लिएपछि नांगो फोटो छाप्ने त्यही पत्रिकाले एक लाखका पहिलो नायक भनेर उनलाई नयाँ सम्बोधन दिए । एक अंकका पछाडि पाँचवटा शून्य थप्न सक्ने उनी पहिलो नायक हुनुका पछाडि उनको धेरै मिहिनेत, परिश्रम भन्दा उनको इमानदारी र अनुशासनको स्वरूप देखिन्थ्यो ।
पुरातन शैलीको ढर्रामा चलिरहेको नेपाली सिनेमा उद्योगमा राजेशले निर्देशकको मनोमानीलाई एक किसिमको बिराम दिए । नयाँ केही गर्न नसके पनि नयाँ गर्ने सोचमा उनले नयाँ–नयाँ निर्देशक र नयाँ–नयाँ कथा, पटकथा खोजिरहे । तर, उनले राजेश हमाल हुनुको पहिचानमा पुलिस र चोरको फरक–फरक भूमिका गर्दा पनि भेष बदल्नुबाहेक आफ्नो कपालमा कैँचीसम्म नचलाएर पनि काम चलाए, यसमा निर्देशकको कमजोरी ३० प्रतिशत थियो भने बाँकी ७० प्रतिशतका भागिदारी उनी स्वयम् नै थिए ।
राजेश हमालसँगै फिल्म उद्योगमा सुरु भएको नयाँ शब्द थियो, प्रोफेसनालिज्म । प्रोफेसनालिज्मको अर्थ, शब्दकोशमा जे भए पनि राजेशले यसलाई परिपक्वता र व्यावसायिकताको सम्मिश्रणमा जोड दिए, यो उनको धरातलीय पक्ष थियो ।
नेपाली चलचित्रका निर्माता अब दु:ख–दर्द र आँसुको कथा बोकेर होइन, हातमा नोटको गड्डी बोकर सही समयमा सही–सही ठाउँमा उभिन थाले । यसभन्दा अगाडि नेपाली सिने उद्योग दया, कृपा र आश्वासनमा चलेजस्तो देखिन्थ्यो, यसमा उनको नायकीय छविको करामत देखियो ।
राजेश हमाल हुनुको पीडा उनले पर्दामा कहिले देखाएनन्, पाकिस्तानका पूर्वराजदूतका छोरा, घरको जेठो छोरा हुनुको जिम्मेवारी, डाक्टर दिदीबहिनीको भीडमा उनले आफूलाई पढ्न नसकेको र पढेर पनि केही नगरेजस्तो भान कहिले दिएनन् । अरू काम नपाएर गरेजस्तो तुच्छ सम्झेर कहिले यस कामलाई लत्याएनन् । पर्दामा उनले राजेश हमाल होइन, अम्बरे, अर्जुन, शंकर, कान्छाका पीडालाई नै साक्षीभावमा राखे ।
निश्चय नै राजेश हमालले अभिनय सुरु गर्दा नेपाली फिल्म उद्योग अहिलेको जस्तै आइसवर्ग नै थियो, पानीमाथि आधा, पानीभित्र आधा । तर, त्यो आधा अंशमा पनि पूरा देख्ने क्षमताका कारण राजेशले आफूलाई पहिलो सुपर स्टार भनाउने मौका पाए । बलिउडका पहिलो सुपर स्टार राजेश खन्ना पर्दामा छाइरहेका वेला जन्मेका हमालले कहिले पनि अभिनयका निम्ति मार्लन ब्रान्डो वा दिलीपकुमार शैलीका मेथड एक्टिङ गर्नुपरेन । वा, अभिनयका निम्ति उनले कहिले पार मा नसिरुद्दिन शाहले जस्तो वजन घटाउनु वा गान्धीमा बेन किंग्स्लेले जस्तो मोटापा लुकाउनुपरेन । नेपाली मिडिया र पत्रकारले राजेश हमालले हेयर स्टाइल मात्र बदल्दा पनि समाचार बनाएकै छन् ।
भारतको पहिलो सुपर स्टार राजेश खन्नाले जस्तै आफूलाई महानायक भनेको सुन्न पाउने उनी पहिलो नायक हुन्, नेपाली रजतपटका । महाचोर नामको फिल्ममा अभिनय गरेपछि खन्नालाई महानायक होइन, महाबोर नायकको उपाधि दिइएको थियो, तर त्यस्तो दुर्भाग्य अझै हमालले भोग्नुपरेको छैन, यो नेपाली दर्शकको सदाशयता पनि हो ।
राजेश हमाल नभइदिएको भए नेपाली चलचित्रमा यी कतिपय कुरा अवश्य हुने थिएनन्, स्टार भ्यालु, डेट सिस्टम अनि नेपालमा नभएको चलन पिए सिस्टम । समय र स्वास्थ्यका निम्ति सदैव सतर्क रहने हमाल नेपाली चलचित्र उद्योगमा पिए राख्ने पहिलो नायक थिए र उनको यो परम्परा अरूले पनि पछ्याए ।
राजेशका कारण नयाँ–नयाँ निर्देशक मात्र होइन, नयाँ–नयाँ लेखक पनि उत्साहित र पुरस्कृत भएका छन् । उनले सिनेमाबाट कमाएको ख्याति कुनै पुस्तक विमोचनमा गएर खन्याइदिँदा नयाँ पुस्ताका उपन्यासकार, कविहरूले जीविकाको नयाँ बाटो बनाउन पाएका छन् ।
राजेश हमाल उभिएर चलेका कतिपय सिनेमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, त्यसमा राजेश हमालले निर्देशकले भनेको भन्दा र लेखकले लेखेको भन्दा उँचो स्वरमा बोलेका हुन्छन्, राजेश हमालको अभिनय नआएको भए यति लाउड बोल्ने वा लाउड सुनिने संवाद पनि सायद लेखिने थिएन ।
राजेश हमाल पहिलो नायक हुन्, जसका कारण पर्दाबाहिरका उनका मनोभूमि पनि लोकप्रिय भएका छन्, ठमेल, चित्तवनको सौराह वा नगरकोट ।
तर राजेश हमालभित्रको असली नायक नभइदिएको भए पर्दाभित्रको सुपर स्टारको पनि अस्तित्व रहने थिएन आज ।
Post by: tundikhel on December 28, 2016, 04:00:27 PM
फिल्म शुटिङ भरी राजेश र करिश्माबीच बोलचाल नै भएन
२२ भदौ, काठमाडौं । (2015-09-08)
स्वाभाविक हो, निर्देशक र नायकबीच मतभेद हुँदा अभिनय, संवाद र दृश्यमा असर पर्छ । तर, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि निर्देशक दीपक रायमाझी र नायक राजेश हमालले पहिलो सिनेमा ‘युगदेखि युगसम्म’मा राम्रै काम गरे । बोलचाल नभएको यो जोडी सम्बन्धमा मामा–भान्जा थिए भने ‘सिन्दूर’मा बोलचाल नभएका जोडी प्रकाश थापा र विश्व बस्नेत मामाका छोरा र फुपूका छोरा थिए ।
मामा दीपक रायमाझीले ‘भाग्य रेखा’बाट निकालिदिएपछि राजेश हमाल क्रूद्ध भए । त्यही चलचित्रबाट डेब्यु गर्न चाहेकी कृष्टि पनि निकालिइन् । यसले यी तीनजनाको सम्बन्ध बिगार्‍यो । राजेश हमाल र कृष्टिको बोलचाल त परै जाओस्, लामो समयसम्म ‘हाई हेल्लो’ पनि भएन । तर पनि, यी जोडीले कैयौँ हिट फिल्म दिए । ‘युगदेखि युगसम्म’ र ‘अधिकार’ यो जोडीका सम्झनलायक फिल्म हुन् ।
यी दुईको सम्बन्ध सहज बनाउन निर्देशक, निर्माताले प्रयास पनि गरे । तर, सम्बन्ध असहज भए पनि यो जोडीले गरेका फिल्म भने सफल रहे ।
कृष्टि अमेरिका पलायन भएपछि राजेशका नायिकाका रूपमा गौरी मल्ल, करिश्मा केसी, मौसमी मल्ल, सिर्जना बस्नेत, जल शाह, विपना थापा, निस्ता मल्ल, मेलिना मानन्धर, निरुता सिंह, रेखा थापा आए । तर, गौरी मल्लसँग बाहेक राजेश हमालले अन्य कुनै नायिकासँग ‘सुटिङ स्पट’मा छलफल गरेनन्, विचार–विमर्श गरेनन् । उनी ती नायिकासँग बोलेको पनि कमै देखियो ।
द्वन्द्वमा मिहिनेत गर्ने नायक राजेशले रोमान्टिक दृश्यमा कमै मिहिनेत गरे पनि उनको करिश्मासितको जोडीचाहिँ पछिल्लो चरणमा ‘करिश्म्याटिक’ नै रह्यो । दुई एक–अर्कालाई बुझेजस्तो पनि गर्ने, दुई एक–अर्काको मत र भावनाको सम्मान पनि गर्ने कारणले मौन भावमै निकै घनिष्ट देखिए, तर दुवैले एक–अर्कालाई सम्मान गरेको नै देखिन्थ्यो ।
करिश्मा र राजेशको जोडी चामत्कारिक रूपले अघि बढिरहेका वेला करिश्माका पति विनोद मानन्धरले मुहूर्त भइसकेको शिवशक्ति फिल्म्स्को पहिलो फिल्म ‘पृथिवी’मा राजेश र करिश्मालाई सँगै खेल्न नदिने निर्णय गरेपछि यो जोडीको परिचय संकटमा पर्‍यो ।
०४९ सालमा टुटेको यो जोडी पछि निकै छलकपटपूर्वक राजविक्रम शाहको ‘प्रतीक्षा’ फिल्मबाट दोहोरिन सफल भयो । छलकपटपूर्वक यस अर्थमा कि निर्देशक शाहले प्रतीक्षाको सुटिङ घान्द्रुकमा एकै ‘सेड्युल’मा गर्ने बताएका थिए । उनले फिल्मका कलाकारबारे जानकारी पनि दिएका थिएनन् ।
घान्द्रुक पुगेपछि राजेश र करिश्मा दुवै दंग परे । राजेशले नायिका मौसमी मल्लको ठाउँमा करिश्मालाई भेटे, करिश्माले नायक धीरेन शाक्यको ठाउँमा राजेशलाई भेटिन् । काठमाडौंमा उनीहरू दुवैलाई ढाँटिएको रहेछ ।
यो जोडीको पुनरागमन गराउनुमा निर्देशक राजविक्रम शाहको देन छ । यो जोडीले यसपछि पनि अन्य फिल्म गर्‍यो, तर बोलचालविना ।
नयाँ पत्रिका दैनिकको फिचरबाट साभार अंश
Post by: dave123kid on January 19, 2017, 02:43:39 PM
Rajesh Hamal is one of the most educated actor in Nepal.
Post by: tundikhel on November 13, 2018, 10:57:59 AM